घटना नियोजित ढंगले दुर्घटना घटाइएको हैन : बेघा - ConfuseNepal
घटना नियोजित ढंगले दुर्घटना घटाइएको हैन : बेघा
१३ भाद्र २०७६, शुक्रबार १३ भाद्र २०७६, शुक्रबार कन्फ्युजनेपाल0Comments
नेकपा १ नं. प्रदेश कमिटि सदस्य अइन्द्र विक्रम बेघाको आज करिब १२ बजे तिर धरानस्थित बिचघोपामा मोटरसाइकल दुर्घटना परि सामान्य घाइते भएका छन । आप्mनै साइडमा गुडीरहेको बेघा सवार मोटरसाइकललाई विपरित दिशाबाट आउँदै गरेको ट्याक्टरले गलत साइडमा आएर ठक्कर दिएको हो । उक्त घटना हुनु लगत्तै ट्याक्टर चालक र सहचालकहरु घटनास्थलबाट फरार भएका छन ।
घाइते बेघा हाल बिपि काइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारत छन । उपचारमा संलग्न डाक्टरको अनुसार बेघा खतरा अवस्था देखी मुक्त भएको बताएका छन । दुर्घटनाको अवस्था हेर्दा बेघा निकै गम्भिर रहेको अनुमान गरिए पनि उनलाई साधरण चोटपटक लागेको थियो । दाहिने साइडको कुमको भागमा धर्सिएको छ ।
घटना पछि उनलाई भेट्न आउने आगन्तुकबाट घटनाको प्रकृति अनुसारको अनुमान लगाइ रहेका थिए । धरानमा उपनिर्वाचनको माहोल तातिने क्रममा बेघा पनि नेकपा बाट बलियो आकांक्षी रहेकोले नियतवस यो दुर्घटना घटाइएको हो की ? भन्ने अनुमान धेरैले लगाएका थिए । यसै सन्दर्भमा भने बेघाले अस्पताल शैया बाटै भने यो दुर्घटना कुनै नियतवस नभएको र कसैले म माथि यस्तो षड्यन्त्र नरचिएको भन्ने मलाइ लागेको छ । यो दुर्घटना नियोजित ढंगले नभएर गाडीको खराबी वा चालकले गाडीको स्पिड कन्ट्रोल गर्न नसकेर घटेको घटना हुन सक्छ । यो प्रहरी प्रसाशनले छानविन गर्नेछ यसमा म विश्वस्त पनि छु ।
नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दै, एमसीसी अनुमोदनबारे विषेश छलफल हुँदै
← ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ को ट्रेलरमा आयो , मुइया को लागि यसो गर्दै छन दया
विश्वकप छनोटमा नेपाल सँग चाइनिज ताइपेइ पराजित →
अल्फा बिटा क्वीज मेनिया २०२० काे सेमिफाइल सम्पन्न